Rima modhi itsika hombe izvozvi, ine mafoni nemalaptops ari kufamba achipa rima modhi mumakore mashoma apfuura. Izvo zvinowedzerwa kumaapps uye mawebhusaiti zvakare - uye iyo Kindle haina mutsauko.
Iyo Amazon Kindle ine, chokwadi, yakapa Inverted Mode kwemakore mazhinji, ichingofamba ichipa yakasviba modhi pane mamwe maturusi nguva pfupi yadarika - uye kushandura zita kuita "rima mode" mukuita kuti vanhu vazive kuti chii.
Kindles inotsigira rima mode
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti une inotsigirwa Kindle. Parizvino rondedzero inosanganisira:
Maitiro ekuvhura yakasviba modhi pane Kindle
Rima modhi ndechimwe chezvinhu zvekuwanikwa, asi pane nekukurumidza kuseta yekuibatidza.
Ita shuwa kuti Kindle yako irikumhanyisa software yazvino (5.13.4 panguva yekunyora).
Kubva mubhuku, tora kumusoro kwechiratidziro uye wobva warova marongero icon. Kana iwe uri pachiratidziro chekumba, unochiwana kumusoro kwepeji.
Sarudzo yemifananidzo ichaonekwa kusanganisira Rima Mode. Tokonya kuti uibatidze kana kudzima.
Zviri nyore. Rangarira kuti nekuti iyo Kindle inoshandisa yekumberi sisitimu yekuvhenekesa, iwe unogona kuramba uchichinja mwero wekuvhenekera kana tembiricha yeruvara (kana uine sarudzo idzodzo) kunyangwe paine nzvimbo chena shoma pane peji mhedzisiro yeizvi yakaderedzwa zvakanyanya.
Iwe zvakare unozokwanisa kuwana yakasviba modhi sarudzo muzvigadziriso> kuwanikwa> invert dema nechena.
Kuti uvandudze software paKindle yako, enda kumaseting> sarudzo dzemudziyo> sarudzo dzepamberi> gadziridza Kindle yako.
Iwo akanakisa eReaders e2022
Amazon Kindle vs Paperwhite vs Oasis: Ndeupi Mhando iri nani muna 2021?
Yakanakisa ebook muverengi 2021: Iyo yepamusoro Kindle uye Kobo ebook vaverengi kuti vatenge izvozvi
Ehe, iwe unogona chaizvo kudzosa Kindle bhuku rausingade. Heano maitiro.